» मकवानपुरमा प्राकृतिक स्रोतको लुट, कर नै नतिरी ढुङ्गा ओसार्न कस्ले दियो छुट ?
मकवानपुरमा प्राकृतिक स्रोतको लुट, कर नै नतिरी ढुङ्गा ओसार्न कस्ले दियो छुट ?
२७ भाद्र २०७८, आईतवार १७:५०
हेटौंडा – मकवानपुरको बकैंया र गढी गाउँपालिकाको साधमा चपकी ढुङ्गा खानीबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा ओसारपसार भईरहेको पाईएको छ । खानीबाट ढुङ्गा फास्ट्रक (द्रुतगती मार्ग) निर्माणको लागि ओसारपसार गर्दा गाउँपालिकालाई विभिन्न किसिमका कर तथा शुल्क नबुझाई ओसारपसार गरेको पाईएको हो ।
सो क्षेत्रमा झण्डै एक दशक देखी मोतिदान कन्ट्रक्सनले शिमव सिमेन्ट उद्योगका लागि ढुङ्गा उत्खनन गर्दै आइरहेको छ । पछि केही समय ढुङ्गा उत्खनन बन्द भएको थियो । अहिले खानी क्षेत्रमा धमाधम चुनढुङ्गा उत्खनन भईरहेको छ । चुनढुङ्गा उत्खननको क्रममा निस्किएको ओभर बटम ढुङ्गा जुन सिमेन्ट उद्योग लागि आवश्यक पर्दैन । सो ढुङ्गा द्रुतगती मार्ग फास्ट्याक निर्माणका लागि कन्ट्रक्सनले लैजाने गरेको स्थानीयहरुले बताए । झण्डै एक महिना देखी स्थानियतहलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई ढुङ्गा ओसारपसार गरिहेको छ ।
ज्याजती गर्योः जिसस प्रमुख खुलाल
यस विषयमा जिल्ला समन्वय समिती(जिसस)का प्रमुख रघुनाथ खुलाललाई लामो समय देखी जानकारी भएपनि मुखदर्शक बनेका छन् । ढुङ्गा उत्खनन र निकासीको बिषयमा आफुलाई जानकारी भएको बताउँदै अध्यक्ष खुलालले कन्ट्रक्सनले लामो समय देखी ज्यादती गर्दै आएको बताए । ‘यस बारेमा मलाई केही समय आगाडी जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि छलफल गरेर अनुगमनमा जाने निर्णय भएको छ ।’ उनले भने
कानुन र्हेनै पर्छ–सिडिओ
झण्डै दुई देखी तीन दर्जन चुनढुङ्गा खानी रहेको जिल्ला मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडिओ)भरतमणि पाण्डेलाई खानी बिषयमा केही जानकारी छैन । उनले खानी बिषयमा आफुलाई कुनै नितिबिधी थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘खोलाको हकमा असार श्रावन भदौ महिनामा उत्खनन गर्न पाईदैन । तर, चुनढुङ्गा खानीमा के गर्न पाइन्छ पाईदैन कानुन पल्टाएर हेर्नुपर्छ ।’
ढुङ्गा ओसारेका छैनौँ– प्रोप्राइटर गौतम्
ओभरबटमबाट निस्किएको ढुङ्गा दैनिक पाँच वटा टिपरले ढुङ्गा ओसारी रहदा पनि मोतिदान कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर राम बहादुर गौतम आफुले ढुङ्गा अन्यत्र बिक्री नगरेको दाबी गरे । हामीले ढुङ्गा ओसार्न प्रयोग हुने बाटो निर्माणको लागि ढुङ्गाको प्रयोग गरेको मात्रै दाबी गरे ।
यसो भन्छन् मकवानपुरगढीका अध्यक्ष
मकवानपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुँमागाईले सो क्षेत्र बकैंया गाउँपालिकामा पर्ने हुँदा क्षेत्रधिकार भित्रको कुरा रहेको बताए । उद्योग र कन्ट्रक्सनले पहिले देखी नै ज्यादती गर्दै आइरहेको बताउँदै अध्यक्ष हुँमागाईले केही हदमा गढीको भुभाग पनि पर्ने भएकोले यसमा बारे आफु लागि पर्ने बताए ।
ढुङ्गा ओसारेको थाहा छैनः बकैंया अध्यक्ष
ढुङ्गा ओसारपसारको बिषयमा कुनै जानकारी नरहेको बकैंया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले बताए । ‘यदी शिवम् सिमेन्ट उद्योग बाहेक अन्यत्र ओसारपसार गरेको छ भने कर तिर्नुपर्छ । यस बिषयमा तत्कालै वडाध्यक्षसंग बुझ्छु’ अध्यक्ष खनालले भने ।
यस बिषयमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरु संग कुरा गर्दा अधिकांश सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु बेखर हुनु आफैमा बिवादास्पद हो । जनतासंग कर उठाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु प्राय ठेकेदारहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा कर उठाउन दातबाट पसिना निकालि रहेका छन् । खुल्लेआम प्राकृतीक स्रोतको दोहन हुँदा पनि कीन हुन्छन् जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरु बेखबर ? गम्भिर प्रश्न चिह्न उठेको छ ।
यसरी कर छली गरेर ढुङ्गा ओसारपसार गरेको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । जिल्लामा हाल तीन वटा सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । ती उद्योगका झण्डै दर्जन बढी चुनढुङ्गा खानी संचालनमा रहेको छ । यसको लेखाजोखा मकवानपुरको कुनै निकायमा छैन् ।